एमाले महाधिवेशनः स्थलमार्गबाट भीम रावल चितवन आइपुगे | Nagarik News - Nepal Republic Media
एमाले महाधिवेशनः स्थलमार्गबाट भीम रावल चितवन आइपुगे
९ मंसिर २०७८ १ मिनेट पाठ
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल चितवन आइपुगेका छन्। १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका रावल बिहीबार अपराह्न चितवनको सौराहा आइपुगेका हुन्।
रावल स्थलमार्ग अर्थात् सडकमार्गबाट महाधिवेशनस्थल आइपुगेका हुन्।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०७८ १८:४६ बिहीबार
एमाले महाधिवेशन उद्घाटन स्थलमार्ग डा. भीम रावल
माओवादी छाडी एमालेमा गएका मधेश केन्द्रित नेतालाई प्रचण्डले भनेः कुकुरको पुच्छर बाँगाको बाँगै
रेल सञ्चालनको बाटो खुल्यो
कानुन र बजेट अभावमा १४ महिनादेखि थन्किएको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले कानुन अभाव र बजेट अभाव देखाउँदै रेल सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदे आएको थियो।
लोकतन्त्रमा सुखको साइना
मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको ३० वर्ष पुगिसकेको छ। पञ्चायत ३० वर्षमै ढलेको इतिहास छ। पञ्चायत र प्रजातन्त्रसमेत गर्दा हाम्रा मूल्यवान ६० वर्ष व्यतीत भइसकेका छन्। सामान्यतः २० वर्ष भनेको एउटा नयाँ पुस्ता तयार हुने समय हो। यस हिसाबले पनि तीन पुस्ता ‘राम्रा दिन’ को प्रतीक्षामै बितिसकेको छ।
युवा बेचेर देश धनी बनाउने भ्रम
आजभोलि एउटा गीत बजारमा आएको छ– ‘केचाहिँ गर्ने हो?’ बोलको। यतिखेर धुर्मुस सुन्तली अभिनित यो गीति भिडियो लाखौँ दर्शकले हेरेर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्। राज्यले लिएको गलत नीतिकै कारण देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरू गर्नु न मर्नुको अवस्थामा पुर्‍याइएका छन्। हजारौँ कोसिसका बाबजुद असफलता मात्र हात लाग्ने परिस्थिति सामना गरिरहेको मातृभूमिलाई माया गर्ने एउटा युवाको जीवनमा आएको आँधी र उसको मनमा घोत्लिएको द्विविधाको स्वर हो– सांगीतिक कोशेली केचाहिँ गर्ने हो?
करिव २ वर्षअघि संसारलाई चकित पार्दै उत्तरको छिमेकी चीनले पाँच दिनमै एक हजार शैयाको अस्पताल बनायो। चीनले आपत्कालीनरूपमा कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न यो अस्पताल बनाएको थियो।